Barkat Sim'oon: Sababni ittifamneef bu'uura hin qabu - BBC News Afaan Oromoo
Warraaqsi Dimookraatawaa Saba Amaaraa Jimaata darbe hoggaantoota isaa gameeyyii Barakat Sim'oonii fi Taaddesee Kaasaa miseensummaa Koree Giddu Galeessaa keessaa akka dhorke beeksiseera.
Hooggantootni lameen fedha uummata Amaaraaf hin dhaabatan, kaamoanii dhaabichaa kan ta'e ''Xirat'' keessattis badii dalaganiiru jechuun dhorke.
Obbo Barakat Sim'oon dhimma kanaa fi kanneen biroorratti ibsa BBC'f kennaniin sababni itti dhorkaman ''bu'uura kan hin qabne'' akka ta'e himanii murticha hin fudhadhu jedhan.
''Ofiif osoo hin jedhiin uummata Amaaraaf qabsaa'aa jiraanne'' kan jedhan obbo Barakat, ''naannoon Amaaraa waggoota 25 darban jijjiirameera, guddateera namoonni jechaa turan amma gahanii uummata Amaaraa hin fayyadne jechuun fudhatama hin qabu'' jedhan.
Uummata fayyaduufi jijjiiruuf waliin qabsoofne, Naannichatti hojiin hedduun hojjetameeras jedhan.
Dhimmi jijjiirama hin deeggaran jedhus nurratti ka'eera kan jadhan obbo Barakat, ''bu'uura yaada jijjiiramaa kan jalqaba kaahe nuhi'' jedhu.
Namni sagalee isaa dhageesisuu kan jalqabe amma reefu ji'a sadii, afur shan dura, kan jedhan qondaalli gameessi kun, nuti bara 2002 fi 2003 eegalee rakkoon guddaan jira, dadhabinni keenya baayyateera jijjiiramuu qabna jechaa turre jedhu.
Biyyas sirnichas gara badiitti kan geessu baayyateera jennee haa jijiiiramnu yaada jedhu kaasnee gatii guddaas itti baafneerra jedhan.
''Jalqabdoonni jijjiiirama kanaa nuudha garuu baanee kana goneerra jechuu hin jaalannu, yeroon sirriidha jennee yaadnutti irratti qabsoofnas jedhan.''
'Xirat' wajjin walqabatee,''maallaqni mootummaan nuu keenne miiliyoona 20, enetireewwaniifi maarchadiisiiwwan dulloomoo waraanicharraa hafaniidha jedhan."
Amma dhaabichi maallaqa biiliyoona 11'tti siiqu fi dhaabbilee 20 naannoo Amaaraaf keessatti horachuu himaniiru.
Galataa waliin gaggeefamuun nuu mala ture garuu innuu hafee haalan nu hin gaggeesine jechuun komataniiru.
Hojiilee dhaaba Xirat jalatti hojjetamanif gabaasni gamaaggama oditaraafi waanni hunduu jira jedhaniiru.
'Waa'een alaabaa maree uummataa barbaada'
''Bakka nuti hin argamnetti ofirraa ittisuufillee haala carraa hin arganneen dhorkamuun keenya akkasittis himatamuu keenya hin fudhannu'' yaada jedhu qabu.
Walgahii sanarratti akka hirmaatan waamichi isaan qaqqabus naannicha keessatti socho'uuf yaaddoo nageenyaa qabaniin mootummaa naannoo wabii gaafatanii mootummaan naannoos nageenya keessaniif wabii isinii kennuu hin dandeenyu waan jedhaniif akka hafan himan.
Magaala Dabramaarqoositti hoteela isaan keessa qubataniiru jedhameefi konkolaataa kan isaaniti jedhame irratti haleellaan raawwachuu yaadachiisuun naannolee biyyattii hedduutti seer-alummaan bayyateera namoonni hedduun nageenya isaniif yaaddahaa jiru jedhaniiru.
Jijjiirama deeggaruufi mormuu
Dirree dimookraasii baldhisuufi araara fiduun olaantummaa seeraa balleessuu akka hin taane muummichi ministeeraas himaniiru kan ta'uu qabus akkasi jedhan.
''Amma naannoo Amaaraatti olaantummaan seeraa kabajamaa hin jiru'' kan jedhan gameessi kun itti gaafatamummaa kan fudhatu qaamuma naannicha bulchudhaa jedhaniiru.
Filannoo dura ta'aa dhaaba ADWUI fi ministira muummee haaraan booda murteewwan haaromsaaf murtaawan hojiitti hiikuuf wanni hojjetamaa jiru kan nama jajjabeessu hedduun jira kana itti fufsiisuun barbaachisaadha jedhan Obbo Barakat.
''Akkuma kana hooggansi haaraan kun kufee kahee muuxannoo isaarraa barachaa akka deemu shakkii hin qabu, ni deeggarras'' jedhan.
Jawaar: ''Oromoofi Amaara adda hiruuf abiddaafi cidii nutti kennaa turanis asi geenyeerra''
Obbo Nigusuu Xilaahuun: 'Waa'een alaabaa maree uummataa barbaachuunsaa hinoolu'